Medicare uye Maitiro Aachakuwanira Wiricheya Yemagetsi
Medicare uye Maitiro Achaiwana Iwe Magetsi hwiricheya
Wako rudo mumwe anonetseka kufamba achivatenderedza wiricheya yemawoko? Kana zvirizvo, funga kuzviwanira iwo magetsi hwiricheya kana simba hwiricheya.
Ndinoziva iwe urikufunga nezvemutengo wakakwira asi iwe unofanirwa kuziva kuti Medicare inovhara zvakaringana se80% yemutengo wemagetsi hwiricheya. Paunobatanidza izvi neinishuwarenzi yako diki unogona kuwana magetsi nyowani hwiricheya nemutengo wakadzika kwazvo kana kusununguka mune dzimwe nguva.
Heano maitiro aunofanira kusangana nawo kuti uwane Medicare kubhadhara chero chikamu chemagetsi ako hwiricheya:
• Mamiriro ezvinhu emunhu anofanira kushandisa magetsi hwiricheya mhedziso inofanirwa kune avo kufamba.
• Munhu wacho haakwanise kufambisa a wiricheya yemawoko kugadzira magetsi hwiricheya zvinosungirwa.
• Munhu wacho anogona kunyatso chengetedza uye nekungwarira kushandisa masimba emagetsi hwiricheya.
• Vanofanira kuziva nzira yekufamba nekubuda mukati memagetsi hwiricheya. Ivo vanofanirwa kuve nekuchinjika kwakanaka.
• Munhu wacho anofanirwa kunge aine tangi rakaringana risingazungunuke kuchovha zvakachengeteka uye zvine simba mumagetsi hwiricheya.
• Havana kugashira mari mumakore mashanu apfuura echikoro kana hwiricheya vakatenga munguva iyoyo.
• Medicare inofanirwa kuve iyo yekutanga inishuwarenzi inotakura kwekutanga kwavo murandu.
Maitiro Ekubhadharira Inishuwarenzi
Kana imwe neimwe yezvinodiwa izvi yagutswa, zvichidaro, munhu anenge achikumbira rubatsiro kubva kuMedare anofanira kupa tsananguro kana kududzirwa kwezvirango zvekushanda pamwe nezvipingamupinyi zvine chekuita nemurwere, izvo zvinobatsira izvo zvinodiwa pakurapa zvePOV kana kuongororwa kwevarwere kunosanganisira iyo POV. Rudzi urwu rwezve ruzivo runofanirwa kuve rakagadzirirwa pane zvinyorwa senge tsamba yemusoro, iyo inoronga hunyanzvi hweanotungamira chiremba.
The hwiricheya zano rekuti mubhadharo unokumbirwa rinofanirwa zvakare kurairwa nachiremba wezveuropi, chiremba wemapfupa, rheumatologist kana wezvekurapa wezvehutano.
Medicare inovhara kusvika pamakumi masere muzana emitero inobvumidzwa asi mari dzekudzorera dzinosiyana nyika nenyika. Mazana emadhora anozivikanwa pagore kubva kuMedicare Chikamu B. Mazwi ese eMedicare anopedzwa mukati memazuva makumi matatu.
Tora Mahara hwiricheya
Medicare ichakubatsira iwe kuwana simba kana magetsi hwiricheya mahara uye unobhadharawo pamwedzi gumi yekubhadhara mari yeiyo hwiricheya kuti iwe sarudza kutenga chaiko. Ipapo, ivo vanokupa iwe sarudzo zvakare renda kana kutenga. Iwo akasarudzika mazwi akapihwa neMedare kutenga kana kubhadharisa magetsi hwiricheya akafanana neaya anoshandiswa nemaoko mavhiripu.
Kana iwe wakafarira sarudzo yekutenga pakutanga, ipapo Medicare ichatarisira iyo makumi masere muzana mu yose mubhadharo mumwe chete. Uye zvakare, iwe unofanirwa kutenga iyo magetsi hwiricheya, Medicare inobhadhara makumi masere kubva muzana emari yekuchengetedza nguva dzese.
Medicare inogona kunge iri rubatsiro rwakakura kutenga kana kubhadharisa magetsi hwiricheya. Tarisa mune iyi sarudzo usati washandisa hombe mari pamagetsi matsva hwiricheya.
Ndokumbira utarise chinongedzo pazasi kuti uwane rumwe ruzivo:
Medicaid / Medicare / Inishuwarenzi